LIVE Blogging: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya // Update - *Live* | KEYDMEDIA ONLINE
LIVE Blogging: Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya // Update - *Live*
Akhristayaal Keydmedia Online (KON) ayaa Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya Daqiiqad Daqiiqad idinku soo gudbiso halka ay mareyso Doorashada / Ka Aqriso Boggaan Wararkii ugu Dambeeyay oo kala dambeeyaan!
*WARKII UGU DAMBEEYAY*
Muqdisho (KON) - Waxaa Xilka Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya loo doortay Xildhibaan Jeylaani Nuur iikar.
Muqdisho (KON) - Prof. Jawaari oo ku guleystay in lo Doorta Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ka dib markii u Cod ku reebay san Musharax oo u ka mid yahay Prof . Cali K. Galeyr.
Keydmedia waxay mar dhaw idiin soo gudbin doontaa War ku saabsan Dorasha Gudoomiyaha oo faah faahsan.
Cali Khaliif Galeyr oo Tanaasulay - 14:35
Muqdisho (KON)- Xili loo ballan sanaan in la guda galo wareegii ugu dambeeyay ee doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa wax yar ka hor ku dhawaaqay inuu tanaasulay Cali Khaliif Galeyr oo ahaa musharixii labaad ee dhibco ahaa ku xigay mudane Jawaari.
Cali Khaliif hadda wuxuu ku dhawaaqay inuu u tanaasulay Jawaari, Hoolka ay doorashada ka socoto waxaa qabsaday sacab iyo farxad aan la soo koobi karin.
Khudbado ayaa hadda la jeedinayaa
Natiijada Wareega Kowaad - 14:13
Muqdisho (KON)- Kadib markii ay suura gali wayday in wareega koobaad lagu soo gabagabeeyo doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa goordhowayd lagu dhawaaqay natiijada wareega koowaad ee doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, xubnaha Baarlamaanka ee codeeyey waa 236-mudane, 234-kamid ah ayaa codeeyey, waxaa codadkoodu halaabeen labo Xildhibaan oo aan la qaadanin codadkooda.
Wareegii Koowaad oo la soo gabagabeeyay - 13:15
Muqdisho (KON)- Doorashadii Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda la soo gabagabeeyay wareegi koobaad, waxaana doorashada wareega koobaad ku horeeya Maxamed Shiikh Cismaan Jawaar oo kamid ahaa shantii musharax ee u taagneyd doorashada Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadaba wareega koobaad ayaa waxaa loo kala helay sidaan:.
Mar dhow ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqi doonaa codadka rasmig ah
Muqdisho (KON)- Waxaa daqiiqado ka hor la soo gabagabeeyay wareega koobaad ee doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
DEG DEG - MUHIIM - DEG DEG
Muqdisho (KON) - Ra'iisul wasaarihiihore ee Xukuumadii xiligeeda dhamaatay C/weli Maxamed Gaas iyo Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shiif Xassan Sheekh Aadan ayaa goordhow waxaa lagu amray in ilaaladooda iyo hubkooda ay kala baxaan xarunta ay ka socoto doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Shir gudoonka doorashada ayaa C/weli Gaas iyo Shariif Xassab ku amray inaan wax hub ah iyo ilaalo ah aan looga baahneyn goobta ay doorashada ka socoto maadaama amaanka goobta ay doorashada ka socoto aad loo adkeeyay.
Ilaalada Shariif Xassan ayaa u hogaansamay amarka ka soo baxay shitr gudoonka, hasayeeshee Ilaaladii C/weli Gaas ayaa diiday inay qaataan amarka loos oo jeediyay.
Muqdisho (KON)- Hadda waxaa si toos ah u socota codeynta doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya waxaa la guda galay wareega koowaad ee doorashada Gudodomiyaha Baarlamaanka.
Marka lasoo gaba gabeeyo wareega koowaad ee doorashada Guddoomiayaha Baarlamaanka musharaxiinta ayaa waxaa loo gudbi doonaa wareegyada kale ilaa laga gaaro wareega ugu dambeeya ee lagu kala baxo.
Shirkaan lagu dooranaayo Gudoomiyaha Baarlamaanka waxaa hadda fadhida 228-kamid ah mudanayaasha Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Tirada Xildhibaanada hadda fadhida kulanka waa kooram buuxa oo dooran kara Guddoomiye iyo labo Guddoomiye kuxigeen.
Akhristayaal Doorashada hadda, Keydmedia waxaa ay idiin balan qaadeysaa inay daqiiqad daqiiqad idinku soo gudbiso halka ay mareyso doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaa hadda socota khudbado furitaan ah iyo kala habaynta qaabka ay u fariisanaayaan Xildhibaanada musharaxiinta iyo martida ka qayb gelaysa doorashada.
Muqdisho (KON) - Waxaa daqiiqado ka hor xarunta tababarka Iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho waxaa si toos ah uga furmay shirka doorashada guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya.
225 xubnoo dayaa soo xaadiraya kulankaan lagu dooranayo gudoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeyn.
La soco wararkeena, daqiiqad daqiiqad
Keydcmedia Online -Xafiiska, Muqdisho